मेरो भ्याकुम क्लीनर G9, विश्लेषण, प्रदर्शन र मूल्य ग्याजेट समाचार
आज हामीसँग तपाईसँग कुरा गर्न खुशी छु सब भन्दा पछिल्लो रूपमा लाग्दो Xiaomi सामान मध्ये एक। यस अवसरमा, शाओमीले भाग लिइरहेका कुनै पनि फर्महरू हामीले सामना गरिरहेका छैनौं एमआई परिवार बाट सम्बन्धित एक सहयोगी। घरका सामानहरूको धेरै विस्तृत श्रृंखलाभित्र, यी दिनहरू हामी परीक्षण गर्न सक्षम भएका छौं Mi Vacuum क्लीनर G9 हैंडहेल्ड भ्याकुम क्लीनर.
एक वैक्यूम क्लीनर कि धेरै सुधार गर्दछ तुलनामा परिणाम स्वायत्त भ्याकुम क्लीनर ती सबै तिनीहरू समेट्न समाप्त गर्दैनन्। यदि तपाई के चाहानुहुन्छ भने भ्याकुम क्लीनरसँग जुन तपाईं नियन्त्रणमा हुनुहुन्छ, Mi Vacuum क्लीनर G9 उत्कृष्ट विकल्प हो। कुनै सतहको लागि सक्सन पावर सबै आवश्यक सामानहरूको साथ।
1 मेरो भ्याकुम क्लीनर G9 शक्ति र नियन्त्रण
2 अनबक्सिंग Mi भ्याकुम क्लीनर G9
3 Mi Vacuum क्लीनर G9 को डिजाईन र एर्गोनोमिक्स
4 Mi Vacuum क्लीनर G9 सुविधाहरू
5 विशिष्टता तालिका मी भ्याकुम क्लीनर G9
मेरो भ्याकुम क्लीनर G9 शक्ति र नियन्त्रण
घर सफा कहिलेकाहीं धेरै को लागी एक आकर्षण हुन्छ। तर हामी तिनीहरू मध्ये जो सफा गर्न को व्याकुल छैन, घरमा स्वच्छता कायम गर्न राम्रो उपकरणहरू छन् केहि महत्त्वपूर्ण छ। Mi Vacuum क्लीनर G9 भ्याकुम क्लीनर हो एक उत्तम गौण ताकि हाम्रो घर जहिले पनि हामी मनपराउने तरिका, सफा छ। के यो तपाईंलाई चाहिएको हो? अब तपाईको एमआई वैक्यूम क्लीनर G9 खरीद गर्नुहोस् उत्तम मूल्यमा।
एक वैक्यूम क्लीनर नियन्त्रण गर्न र एकै हातले सिमलेस ह्याण्डल गर्नुहोस्। र खाली पावरसँग हामी यसलाई घर वा हाम्रो कारको लागि कहिँ पनि प्रयोग गर्न सक्दछौं। हामीले भ्याकुम क्लीनरहरू देख्यौं जुन सफाईको लागि ठूलो संख्यामा सामानहरू प्रस्ताव गर्दछन्। र यो प्राय: यस्तो हुन्छ कि तिनीहरू मध्ये धेरै जसो प्रयोग नगरिएको र हराएको पनि छ। शाओमीले राम्रोसँग समावेश गर्दछ केही सामानहरू तर १००% उपयोगी कुनै पनि अवस्थाको लागि।
अनबक्सिंग Mi भ्याकुम क्लीनर G9
हामी केहि अन्य सामानहरूको अनावश्यकताको बारेमा टिप्पणी गरिरहेका थियौं जुन हामीले अन्य भ्याकुम क्लीनरहरूमा भेट्टाउन सक्षम भएका छौं। अब तपाईंलाई भनेको समय आयो हामीले बाकस भित्र के पाउँछौं Mi Vacuum क्लीनर G9 भ्याकुम क्लीनर। पहिलो कुरा यो हो कि बाकस अपेक्षित भन्दा ठूलो देखिन्छ, तर यो यसमा समावेश गरिएका केही सामानहरू द्वारा वर्णन गरिएको छ।
हामी भेट्छौं भ्याकुम क्लिनरको शरीर। एक छ उचित आकार एक हात एक अपरेशन को लागी तर केहि अलि भारी हुन सक्छ। यदि हामीले यसलाई सक्षम गरिएको भागद्वारा समात्यौं भने हामी एउटा ट्रिगर भेट्टाउँदछौं जुन औंलाहरूको अगाडि छ जहाँ हामी भ्याकुम क्लिनरलाई काम गर्न सक्रिय पार्छौं।
सबैभन्दा धेरै परिमाणको सामान अर्को हो कोष्ठक जुन हामी भित्तामा पेच गर्न सक्छौं वा कपाटको ढोकामा। त्यहाँ हामी मी भ्याकुम क्लीनर G9 छोड्न सक्छौं जब हामी यसलाई प्रयोग गरिरहेका छैनौं। र यदि हामी यसलाई प्लगको छेउमा राख्छौं, हामी यसलाई चार्ज गर्न सक्दछौं जब हामी यसलाई समर्थनमा छोड्दछौं।
हामी संग साँघुरो ब्रश, छोटो दूरीमा प्रयोगको लागि, वा कार फ्लोर मैटहरूमा, उदाहरणका लागि। Y एक ठूलो ब्रश भुइँ वा कालीनको लागि अधिक। यो ठूलो ब्रश एक्स्टेन्सन ट्यूबसँग मिल्दछ जुन हामी तल झुन्डिन बिना आरामपूर्वक भुइँ खाली गर्दछौं।
हामी पनि एक पाउन सख्त क्षेत्रहरूमा सजिलो पहुँचको लागि गौण कि हामी सीधा वा एक्स्टेंशन ट्यूबको साथ अनुकूलन गर्न सक्छौं। र एउटाको अन्तिम सहयोगी सानो ब्रश अन्तमा थोरै "गाह्रो" फोहोर राम्रोसँग सफा गर्नुहोस्। अवश्य पनि हामीसँग छ चार्ज केबल यसले भ्याकुम क्लिनरलाई बिजुली नेटवर्कमा जोड्दछ।
अब Mi Vacuum क्लीनर G9 पाउनुहोस्, भ्याकुम क्लीनर जुन सबैले चाहान्छ।
Mi Vacuum क्लीनर G9 को डिजाईन र एर्गोनोमिक्स
जब हामी सियाओमीको बारेमा कुरा गर्छौं, हामी प्राय: राम्रो डिजाइनको बारेमा कुरा गर्छौं। एक फर्म छ कि कुनै पनि उपकरणमा एक पहिचान योग्य डिजाइन लाइन। उसको शैली साधारण रेखा, हल्का र colorsहरू (प्राय: सेता), र लोगोमा आधारित हुन्छ जुन लगभग ध्यान नलिएको हुन्छ। एम आई भ्याकुम क्लीनर G9 भ्याकुम क्लिनर यी सबैको एक स्पष्ट उदाहरण हो.
भ्याकुम क्लिनरको शरीरलाई हेरेर, यो ए छ ढाँचा एक हात संग अपरेट गर्न डिजाइन, यो दायाँ वा बायाँ फरक पर्दैन। हामीसँग सक्षम गरिएको अंशद्वारा यसलाई समात्दै सक्सन सक्रिय गर्न एक सहज ट्रिगर.
तल हामी फेला पार्दछौं ब्याट्री, यो के हो सजीलो हटाउन योग्य एक साधारण क्लिकको साथ। एक विवरण सराहना गर्नु पर्छ, किनकि यदि ब्याट्री बिग्रन्छ वा चार्ज क्षमता गुमाउँछ हामी यसलाई बदल्न सक्छौं र आरामदायी सामानको पूर्ण रूपमा प्रयोग गरिरहनुहोस्।
मा पछाडि यो, हातले समात्दै, हाम्रो औंठाको साथ पहुँचयोग्य छ, हामी फेला पार्दछौं सक्शन शक्ति नियन्त्रण। हामी सँग स्विच अप स्थिति गर्न को लागी संभावना छ तीन बिभिन्न सक्सन शक्तिहरू। थाहा छ कि अधिकतम शक्ति १२० हो र त्यो कहिलेकाँही गलैचालाई खाली गर्न एकदम शक्तिशाली र असुविधाजनक हुन्छ, उदाहरणको लागि, किनकि यो पूर्ण रूपमा अड्किएको छ।
मा माथि भ्याक्यूम क्लिनरको शरीरको हामी फेला पार्दछौं MI लोगो। बीचमा मोटर छ, र पारदर्शी भाग मार्फत हामी सुन्तला फिल्टर र उनीहरूको देख्न सक्दछौं ०..0,6 लिटर ट्या tank्क। भ्याकुम क्लीनरको सेतो र color्ग सबैभन्दा उपयुक्त नहुन सक्छ किनकि यो छिट्टै फोहोर हुन्छ र दागहरू तुरून्त देखिन्छ। ब्रुसमा जस्तै केशरी विवरणका साथ बाँकी सामानहरू पनि उहि सेतो रंगको हुन्छ। को बाहेक ट्यूब स्टेनलेस स्टीलको रंग भएको.
Mi Vacuum क्लीनर G9 सुविधाहरू
शाओमीको नाम सामान्यतया जोडिएको हुन्छ राम्रो मूल्यमा राम्रो मूल्य उत्पादनहरू। र यो त्यस्तो चीज हो जुन प्रतिस्पर्धाको रूपमा "उही" प्रस्ताव गरेर कमाईएको थियो लगभग हरेक पटक धेरै कम मूल्यमा। भ्याकुम क्लीनरको मामला कुनै अपवाद छैन र हामी कसरी हेर्छौं एक धेरै राम्रो गुण भ्याकुम क्लीनर धेरै कम को लागी हाम्रो हुन सक्छ त्यस्तै फाइदाहरूका लागि अरू कति खर्च हुन्छन्। यसलाई थप ल्याप नदिनुहोस्, अब Mi Vacuum क्लीनर G9 लाई अर्डर गर्नुहोस्
भ्याकुम क्लिनर खरीद गर्दा हामीले हेर्ने पहिलो विवरणहरू मध्ये एक हो सक्शन शक्ति। हामीले माथि उल्लेख गरिसक्यौं, एम आई भ्याकुम क्लीनर G9 भ्याकुम क्लीनरसँग शक्तिमा आधारित तीन सक्सन मोडहरू छन्। अधिकतम सक्शन पावर हुदै १२० वाटको हावा। हामी तपाईंलाई पहिल्यै बताइसकेका छौं हामी पूरै घर सफा गर्न सक्दछौं, कार्पेट सम्म, न्यूनतम स्तरको साथ, एकदम पर्याप्त।
Mi Vacuum क्लीनर G9 भ्याकुम क्लीनर तथाकथितको साथ सुसज्जित छ चक्रीय प्रविधि। यस प्रणालीमा आधारित छ १२ चक्रवातaको साथ घरेलु हावा शुद्ध गर्न मद्दत गर्दछ .99,97 XNUMX..XNUMX% निस्पंदन दर र उही समयमा, यसले फिल्टर र मोटर क्लोगिंग बेवास्ता गर्दछ। यस तरिकाले, को प्रदर्शन एस्पीएटर १००००० आरपीएममा घुम्दै र यसको अपरेशनको उपयोगी जीवन बढेको छ।
स्वायत्तता यो Mi Vacuum क्लीनर G9 को अर्को शक्ति हो। हामीले यसको अवधि भेट्टायौं अपरेसनमा minutes० मिनेट सम्म। त्यो यदि, यो हामीले छनौट गर्ने सक्सन पावरमा निर्भर गर्दछ ताकि स्वायत्तता बढी वा कम तन्किन्छ। अधिकतम पावर लेभल प्रयोग गरेर ब्याट्री १० मिनेट भन्दा बढि जानु हुँदैन। तर हामीलाई याद छ कि न्यूनतम उर्जा स्तरको साथ यो लगभग सबै अवस्थाहरूमा पर्याप्त हुन्छ।
विशिष्टता तालिका मी भ्याकुम क्लीनर G9
मोडेल मेरो भ्याकुम क्लीनर G9
पोटेरिया 120 AW
स्वायत्तता २० मिनेट सम्म
हटाउन योग्य ब्याट्री SI
जम्मा तौल 5.45 किलो
आयामहरू 75.2 x 32.9 x 13.2 सेमी
मूल्य 179.00 €
लि link्क खरीद गर्नुहोस् मेरो भ्याकुम क्लीनर G9
पूर्ण रूपमा एक हात संचालन.
छ सक्शन पावरका तीन मोडहरू बिभिन्न आवश्यकताको लागि।
स्वायत्तता प्रयोगको एक घण्टा सम्म।
एक हात उपयोग
El सेतो रंग सजीलो बाहिर जान्छ फोहोर.
परिणाम थोरै भारी जब हामी यसलाई केहि समयका लागि प्रयोग गर्दै आएका छौं।
यो एक स्क्रिन छैन जानकारीको लागि।
कुनै स्क्रिन छैन
मेरो भ्याकुम क्लीनर G9
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » सामान्य » समीक्षा » मेरो भ्याकुम क्लीनर G9, विश्लेषण, प्रदर्शन र मूल्य